Ugu yaraan lix askari oo lagu dilay kadib markii qof isa soo miidaamiyay uu isku qarxiyay xero milatari oo kutaala duleedka Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan lix askari oo lagu dilay kadib markii qof isa soo miidaamiyay uu isku qarxiyay xero milatari oo kutaala duleedka Muqdisho
Ugu yaraan lix askari oo lagu dilay kadib markii qof isa soo miidaamiyay uu isku qarxiyay xero milatari oo kutaala duleedka Muqdisho
April 10, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Ugu yaraan lix askari oo lagu dilay kadib markii qof isa soo miidaamiyay uu isku qarxiyay xero milatari oo kutaala duleedka Muqdisho. [Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan lix askari oo katirsan dowladda Soomaaliya ayaa geeriyooday kadib markii qof isa soo miidaamiyay uu isku qarxiyay xero milatari oo kutaala duleedka Muqdisho maanta oo Isniin ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo amni.
Qofka isa soo miidaamiyay oo ku labisnaa dharka askarta ayaa soo galay xerada oo askarta lagu tababaro subaxnimadii maanta oo Isniin ah waxaana uu isku qarxiyay walxaha qarxa oo uu ku watay caloosha meel u dhow saraakiil iyo askar, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen.
Kuwa dhintay ayaa waxaa kamid ahaa saraakiil milatari oo sare. Tobonaan kale oo askar ah ayaa ku dhaawacmay weerarka.
Ururka hubaysan ee Al-Shabaab ayaa sheegatay in ay iyadu geysatay weerarka, sida ay ku warantay idaacadooda, radio Al-andalus.
Kani waa weerarkii ugu dambeeyay oo taxane ah oo ka dhan ah haayadaha amniga Soomaaliya kadib markii ururka hubaysan ee Al-Shabaab ay kordhiyeen weeraradooda gudaha caasimada Muqdisho intii lagu guda jiray asbuucyadii laga soo gudbay.
January 16, 2017 Doorashada guddoomiyaha aqalka sare iyo ku xigeenadiisa oo la mudeeyay
At last six soldiers killed after suicide bomber hit military camp in the outskirts of Mogadishu
Afar dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay gobolka Jubbada Hoose
Muqdisho-(Puntland Mirror) Afar dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn uu Mareykanku geystay. Bayaan maanta oo Axad ah soo baxay, Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeyntu ay ka dhacday deegaanka Araare ee [...]